Fedora inoshanda kuita kuti zvishandiso zvako zvidiki | Linux Vakapindwa muropa
Fedora inoshanda kuita kuti zvishandiso zvako zvidiki
Pandakachinjira kuLinux, ndaigona kuona kuti mashandisiro acho anga asina kukura seWindows. Kune mamwe anoita basa rakakura uye anorema mashoma megabytes, kana muWindows chirongwa chakaenzana chinogona kudarika 1GB. Asi zvinhu zvinogara zvichiita nani uye ndizvo zvaari kuda Fedora kugadzira a minimization timu (Chikwata Chekuderedza) kuitira kudzikisa saizi yesoftware inowanikwa yekugovera.
Kuti ive chaiyo, chinangwa chaFedora uye chitsva minimization timu kudzikisa saizi yemapakeji ekushandisa, nguva dzekumhanya uye imwe software nekugadzira madiki midziyo, kubvisa kutsamira paasingadiwe, uye kudzikisira tsoka yechigamba. Chete nekubvisa zvisina basa kutsamira ndipo patinogona kuwana zano rekuti izvo Fedora zvairi kutsvaga zvinopfuura kudzora saizi ye software yayo; anoda kuti zvese zvishande zvirinani.
Fedora inogadzira timu yekudzora software
Basa rakakura rinoitwa new timu yekudzikisa ongorora kutsamira kwepakeji kuona kana paine mukana mushoma wekuzvidzivirira, kugadzira modemu hova dzine dzakadzikiswa vhezheni dzemapakeji, senge kudzivirira zvinyorwa uye nedzimwe nzvimbo dzichiri kuongororwa. Adam Samalik anoti:
Ndiri kutanga Chinangwa Chekuderedza chinotarisa kudzikisa saizi yekumisikidza yemamwe maficha anozivikanwa, nguva dzekumhanya, uye zvimwe zvidimbu zve software muFedora Uye kune idzva reMimimization Team rinogadzira. Nhengo dzechikwata dzinotaurirana nekushanda pamwe nevachengeti veFedora, maturusi ekuvandudza uye masevhisi, vanogadzira mishumo inoratidza chimiro cheiyo Fedora ecosystem uye kuenzanisa nedzimwe ecosystem, nezvimwe. Chinangwa ndechekugadzira nharaunda umo zviri nyore kune vedu vanochengeta kuchengeta zvinhu zvidiki nekufamba kwenguva. Haisi kungoita kamwe-nguva kuedza.
Iwe une rumwe ruzivo mune izvi zvinongedzo: kudzikisira, minimization timu y chirongwa chekuita.
Fedora 30 inosvika zviri pamutemo, inosanganisira GNOME 3.32
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fedora inoshanda kuita kuti zvishandiso zvako zvidiki